မန်းရွှေစက်တော် ဘုရား အခြေခံဈေးသည်များ သမဂ္ဂ ဖွဲ့စည်း - Yangon Media Group
မင်းဘူး၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၃
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး မင်းဘူး(စကု)မြို့နယ်အတွင်းရှိ မန်းရွှေစက် တော်ဘုရားကြီးတွင် ဖေဖော်ဝါရီ ၂ရက်က မန်းရွှေစက်တော်ဘုရား အခြေခံဈေးသည်များသမဂ္ဂ ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြောင်း ဈေးသည်များထံမှ သိရသည်။ အဆိုပါ မန်းရွှေစက်တော်ဘုရား အခြေခံဈေးသည်များသမဂ္ဂဖွဲ့စည်းရာတွင် မန်းရွှေစက် တော်ဘုရားကြီးတွင် ဈေးရောင်းချနေသည့် ကုန်စိမ်းသည်၊ မှို ခြောက် ပန်းခြောက်၊ မျှစ်ခြောက်သည်၊ အနှိပ်သည်၊ ရေနွေးရောင်းချသူ၊ ကွမ်းယာရောင်းသူစသည့် ပျံကျဈေးသည်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့ ကြောင်းသိရသည်။
ဈေးသည်များ သမဂ္ဂဖွဲ့စည်းရာတွင် ဈေးသည် ၂ဝဝခန့်လာ ရောက်ကြပြီး ၎င်းတို့ထဲမှာ အလုပ်အမှုဆောင် ၂၅ ဦးကို မဲပေးရွေးချယ်ခဲ့သည်။ မန်းရွှေစက်တော်ဘုရားကြီးတွင် ကွမ်းယာရောင်းချသူ ဦးတင်ရွှေက ”အခြေခံဈေးသည်တွေ သမဂ္ဂဖွဲ့စည်းလိုက် တဲ့အတွက် ဈေးသည်တွေကြုံတွေ့ ရတဲ့ အခက်အခဲတွေကို သမဂ္ဂအဖွဲ့က ဥပဒေကြောင်းအရ တရားဝင်ဖြေရှင်းပေးမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်”ဟု ပြောသည်။
မန်းရွှေစက်တော်ဘုရားကြီးတွင် လုပ်ကိုင်နေသည့် အခြေခံ ဈေးသည်များ၏ သာရေးနာရေးနှင့် ဈေးသည်များကြုံတွေ့ရသည့် အခက်အခဲများကို တရားဝင်ဖြေ ရှင်းပေးရန်အတွက် ဖွဲ့စည်းခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ သမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်း ကြီးအား တရားဝင်အဖွဲ့အစည်း ကြီးဖြစ်ရန် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း မန်းရွှေစက် တော်ဘုရား အခြေခံဈေးသည်များသမဂ္ဂ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်တင်၏ ပြောကြားချက် အရသိရသည်။
ဟားခါး-ကလေး ကားလမ်းမကြီး တိုးချဲ့ဖောက်လုပ်ရာတွင် လမ်းဘေးဝဲယာ မြေယာဆုံးရှုံးသူများ လျော်ြေ??
မြန်မာ-အိန္ဒိယ ရိဒ်နယ်စပ်တွင် တရားမဝင် ကုန်စည်ရောင်းဝယ်မှုနှင့် တရားမဝင် သွားလာဝင်ထွက်မှုမျာ
လာရောက် ထွက်ဆိုရန် ပျက်ကွက်နေသော အရေးကြီးသက်သေ လေဆိပ်လုံခြုံရေး ရဲအရာရှိကြီးကို ဇန်နဝါရီ ??
ပရိသတ်တွေကို ကိုယ်တိုင်ရေး သီချင်းဂီတ ဗီဒီယိုကိုပြသခဲ့တဲ့ ယီရိ
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအတွက် လူဦးရေစာရင်းကောက်ယူရာတွင် ဒုမြို့နယ်နှင့် လက်ထောက်မြို့နယ်ပညာရေးမှူးများကို ပုံသေတွဲဖက်တာဝန်ပေးမည်